विभेदका नौ बुँदा - Pipala Dhungana पिपला ढुङ्गाना
Home » विभेदका नौ बुँदा
वेश्या शब्द सुन्दा कतिलाई अपाच्य र असभ्य लाग्छ तर महिलालाई समाजले आज पनि भोग्याका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ। कहिलेकाहीं लाग्छ– व्यवहारका आधारमा हेर्ने हो भने त समाजमा उत्ति नै पुरुष वेश्या पनि छन् तर हा म्रो समाजमा वेश्या भन्नेबित्तिकै प्रायः सबैले स्त्री जातिलाई बुझ्छन्। पोथी वेश्या हुन्छे भने भाले वेश्या पनि अवश्य हुन्छ किनकि वेश्या भोग्ने पनि वेश्या नै हो। मेरी साथीले मलाई बताएको एउटा कथाले समाजले राम्रो पहिरनमा सजिएर साँझबिहान हिँड्ने स्त्रीलाई पनि वेश्या देख्ने तथ्य उजागर गर्छ। मेरी साथी केहीअघि साँझको समय लाजिम्पाटबाट आफ्नो निवासतर्फ फर्कंदै रहिछन्। रत्नपार्क पुग्दा आफ्नो निवास कालिमाटी पुग्न उनले बस पाइनन्। उनले हिँडेरै कालीमाटी जाने निधो गरिछन्। त्यत्तिकैमा उनका श्रीमान्ले उनलाई फोन गरेर केहीबेर रत्नपार्कमै कुरिराख्न र आफू लिन आउने बताए। साथीका अनुसार उनी रत्नपार्कमा पाँच मिनेटजति मात्र उभिइन् तर त्यसबीचमा धेरै पुरुषले उनलाई ‘दाम कति हो ? , रेट कति हो ? ’ भन्दै उनको मोल सोधेछन्। मेरी साथीले रत्नपार्कमा उनी उभिएको त्यो पाँच मिनेट जीवनकै त्रासदपूर्ण र लामो भएको बताइन्।
यो लेख अन्नपुर्ण पोस्टमा २६ फागुन २०७४ मा प्रकाशित भएको थियो http://annapurnapost.com/news/92891
विभेदका नौ बुँदा2018-04-092021-01-30https://pipala.com.np/wp-content/uploads/2020/03/coollogo_com-1935227.pngPipala Dhungana पिपला ढुङ्गानाhttps://pipala.com.np/wp-content/uploads/2018/04/women-empowerment-5aa34a68f1cba9.93569981.jpg200px200px